Ogwe Mbara Igwe, Ogwe Mbara Igwe Mbara Igwe, Mpekere Mpekere Mpekere - Amso
Amso Solar mere nke oma n’oru ocha nke igwe na igwe n’ahu site na afọ iri-abuo na ise. Usoro mmepụta ihe nke anyanwụ anyị na-ekpuchi usoro 5BB na 9BB, ike dị ọtụtụ site na 5w ruo 600w.
9BB 144 ọkara mkpụrụ ndụ anyanwụ ogwe niile nwa mono ...
9BB 144 ọkara sel ndị na-ahụ maka anyanwụ mono 430w
72 mkpụrụ ndụ ọkọlọtọ size mono ojii anyanwụ panel ...
Mini anyanwụ ogwe ahaziri mkpụrụ ndụ poli 20w
Amso Solar Teknụzụ Co., Ltd. bụ onye na-emepụta mbara igwe nke mepụtara kemgbe afọ iri na abụọ. Anyị nwere ahụmịhe zuru oke na ọrụ OEM na ODM. N'ime afọ ndị gara aga, Anyị eguzobewo ụlọ ọrụ siri ike na ọtụtụ ụdị na ndị nrụpụta ọkwa. E hiwere anyị na 2017 iji weta akara anyị: Amso Solar. Factorylọ ọrụ anyị dị n'akụkụ Ọdọ Mmiri HongZe mara mma, nke dị na Huaian, JiangSu, China.
Amso Solar Technology Co., Ltd. Okwuchi